9 izinyanga 1 iviki edlule #1104 by i-alogie
Ngifuna nje ukuzethula. I-Alistair negama lami ngihlala eNyakatho California. Ngisanda kufika ku-simming futhi ngithenge i-P3Dv4. Kukhona i-tonware ye-freeware ngaphandle, kodwa ukuhambisana ne-V4 kungaba nzima ukuthola ezinye zezindawo. Ngiyathanda ukuthi ukulandwa kukaRioooo kuyi-executable ezithintekayo ngakho angikudingeki ngikhathazeke ngokususa umphumela, ama-gauge noma amafolda omsindo njll. Ikhono lokukhipha ihlanzekile futhi ibhonasi. Ukubhaliselwa kwe-jumbo kwakungu-no-brainer.
Ngiyakujabulela amajethi ezindizayo ezindizayo kanye nezinsizakalo ezincane namajethi. Ukufika kwami ​​emajetsheni ezentengiselwano akusebenzi kahle kakhulu, ngakho-ke ngidinga ukujwayela.
Ngithanda ukucwiliswa okuncane ngakho ngingeze:
I-FTX Global Vector
Vula i-LC Europe, NA ne-SA
Izindawo zaseScotland, eNgilandi naseNorCal ezivela e-ORBX.
Nginomgogodla osemdala osuselwe kumgqa we-Core i5-2500k. Njengoba ngithenge, ngithuthukise i-RAM ku-16GB, ngifake i-SSD ye-OS ne-SSD ezinikezele yemidlalo, futhi ngeneze ikhadi le-GTX 1050 Ti. Kwenza kahle ku-1680 x 1050 umqapha wami omdala.
Ngezinhloso ze-simming nginayo i-TrackIR 5 ne-HOTAS Cougar (engahambisani nendawo ngaphandle kwebhodlela lokufaka endaweni e-throttle) ne-pedestri ye-TMaster.
Isikhathi ukudala page: 0.209 imizuzwana